LG G3 နှင့် LG G2, fratricidal duel | Androidsis
ငါတို့ကိုမျက်နှာပြချင်လား အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုတွင် LG G3 နှင့် LG G2 နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနေ့စဉ်သုံးသော applications အမျိုးမျိုးကို run သောအခါမည်သည့်အရာသည်ပိုမြန်သည်ကိုသိရန်အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်ခြင်း။
အကယ်၍ အဖြေသာဟုတ်လျှင်၊ ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးတွင်ပူးတွဲပါသောဗီဒီယိုကိုလက်လွတ်မသွားရန်သင့်အားအကြံပေးသည် "မြင့်မားသောသတ်မှတ်ချက်များပိုမိုမြင့်မားသောမြန်နှုန်း", အမြဲပြည့်စုံသည်မဟုတ် Android ဆိပ်ကမ်း၏ကမ္ဘာ၌။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့လုံးဝမျှတပြီးရိုးသားဖို့ဆိုရင်ငါပြောရမယ် LG G3 သည်မူရင်းစက်ရုံအခြေအနေတွင်ရှိသည်, root သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်မဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ, အ LG G2 မှာ Root Recovery ရှိပါတယ် နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် LG G3 ၏ Rom port ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် kernel နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ဒယ် LG G2 D802 ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်ချိန်ညှိထားသည်။
အဆိုပါနှစ်ခုမော်ဒယ်များကိုက်ညီတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနာမည်နှင့်အတူဆိပ်ကမ်း၏သောအမှု၌ G2 စံပြဖြစ်ပါတယ် D802 နေစဉ် G3 စံပြဖြစ်လာသည် D855.
ဤအလွန်ကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအားကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားသည် ယနေ့ခေတ်တွင် Android သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအမျိုးမျိုးသော application များကို run သည်နှစ် ဦး စလုံးဆိပ်ကမ်းများတွင်တုံ့ပြန်မှုနှင့်သေဒဏ်စီရင်မြန်နှုန်းကိုတစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုအားကိုင်တွယ်သည်ဟုယုံကြည်သူများကိုရှောင်ရှားရန် (သို့) လျှောက်လွှာနှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မလည်ပတ်နိုင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်လျှောက်လွှာတစ်ကြိမ်လျှင်အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချို့မှာသုံးကြိမ်အထိပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထောင်ချောက်မရှိ၊ ကတ်ထူပြားနှင့်မည်သည့်အရာမရှိကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်သည် ဗွီဒီယိုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမည်သည့်အရာမျှ ဖြတ်၍ မကူးပါ.
အကယ်လို့သင်ဟာ ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်၊ ဗွီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာ၊ LG က G3 သောအကြားလှည့်ပတ်တတ်၏ အများပြည်သူရောင်းရန် 500 မှ 550 ယူရို၏ထိခိုက်နစ်နာရန် LG က G2 အခုအခုပတ်ပတ်လည်ဖြစ်နေပြီ ယူရိုမှ 300 မှ 350ဒီတစ်ခါလည်းငါပြောကောင်းပြောမယ်၊ ငါတို့အိတ်ကပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိဖို့အဲဒီယူရို ၂၀၀ ရဲ့ခြားနားချက်ကိုပေးဆပ်ရကျိုးနပ်သင့်မသင့်ကိုသင်အနည်းငယ်စဉ်းစားမိစေခဲ့တယ်။
1 LG G3 နှင့် LG G2 နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
2 LG G2 နှင့် LG G3 နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
LG G3 နှင့် LG G2 နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
အလင်းရောင်နည်းသည့်အခြေအနေများတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော focus နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရိုက်ချက်များဖြင့်ဓာတ်ပုံကင်မရာ။
micro usb ကဒ်များကိုထောက်ပံ့သည်။
LG G2 နှင့် LG G3 နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
LG G3 ထက်ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုရှည်သည်။
ပိုမိုတိကျသောအရောင်များရှိသောမျက်နှာပြင်သည်အဖြူသည်စင်ကြယ်သောအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး LG G3 ကဲ့သို့မပြည့်စုံပါ။
LG G3 ထက်စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ယူရို ၂၀၀ နီးပါးစုဆောင်းထားသည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် LG G3 ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်သင့်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မယ့်ရှုထောင့်တွေကကြည့်မယ် ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကဒ်များအတွက်အထောက်အပံ့LG G3 ၏အားနည်းချက်များအနက်တစ်ခုအားဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်တွင်တွေ့နိုင်သည်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောသိုလှောင်မှုအထောက်အပံ့နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုထောက်ပံ့မှုဖြင့်သင်အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သည်။ USB OTG ရိုးရှင်းသော OTG cable ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် gazillion gigabyte external hard drive သို့မဟုတ် pendrive ဖြစ်သည့်မည်သည့်ဖယ်ရှားနိုင်သောသိုလှောင်မှုကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သေးငယ်သောအရွယ်အစားသေးငယ်သော micro USB connector များအတွက်စတင်ပြီးဖြစ်သော Pendrives သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [Video-Test] LG G3 နှင့် LG G2: မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု
ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ သူတို့နှစ် ဦး လုံးကစက်ရုံကဖြစ်သင့်တယ်။ ငါဒီလိုနှိုင်းယှဉ်မှုကိုနားမလည်ဘူး ...
ကောင်းပြီ၊ နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုအမြန်ဆုံး root လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုကို flash လုပ်ခြင်းနှင့် LG ၏တိုက်ရိုက် port ဖြစ်သော LG G2 တွင်သယ်ဆောင်ထားသည့် Cooked Rom ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင်၏ terminal မှပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြသနိုင်သည့်နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ G3, အရာအားလုံးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် LG G3 ကိုသူ့ဟာသူထက်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်စွမ်းသော။
Rafa Collado ဟုသူကပြောသည်
အစ၌ G2 နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
G3 သည်လူငယ်အားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်နက်ရှိုင်းစွာအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု။ (Android L?)
ငါကဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးရှိတယ်။ ခံစားချက်ကသူတို့ဟာ S5 နဲ့ Note3လိုမျိုးမတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။
Rafa Collado သို့ပြန်သွားပါ
g2 တွင်မည်သည့် rom ကိုအသုံးပြုကြောင်းပြောပြပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ g3 ရဲ့ port ကိုသုံးထားပြီးဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်မသေချာလို့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအရမ်းများလွန်းတယ်
စမ်းသပ်မှုကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါမှာ G2 ရှိတယ်၊ ငါဖုန်းနဲ့အရမ်းပျော်တယ်။ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားသော ROM ကိုဝေမျှလိုပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ခမ်းနားစမ်းသပ်ခြင်း။ ငါ၏အ G2 သည် (ငါထင်သော်လည်းအခိုင်အမာခံရဖို့ဘယ်တော့မှမ) သောလုပ်ငန်းတာဝန်ထက်ပိုမိုကြောင်းသိရသောအခါဝမ်းသာခဲ့သည်။
သို့သော်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပြောသည့်အတိုင်းသင်အသုံးပြုသော ROM ကိုဝေမျှနိုင်မည်လား။ ငါကကြိုးစားရန်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်!
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြေဆိုပြီးပါပြီ။ ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ကိုတောင်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ Rom သည် Cloudy G3 ဖြစ်သည်။
တကယ်ပဲ ... ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ်။ အမြစ်ရော၊ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ရောမတွေအစား ... G3 ကနက်ရှိုင်းစွာအမြတ်ထွက်မသွားဘူးလား။ သူတို့မှာရယ်အတူတူပဲ၊ ၀.၂GHz ကွာခြားချက်နဲ့အတူတူပဲ။ G0.2 ကအဲ့ဒီ pantallion ကိုရွှေ့ရမယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းတွေလိုထင်နေကြတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မော်ဒယ်များ (G2 နှင့် G3 ကွဲပြားခြားနားသော sims များဖြင့်) ကိုအသုံးပြုသည်။ G3 ၏မျက်နှာပြင်သည်ပိုမိုတောက်ပပြီးကင်မရာ၏အာရုံသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ G2 ထက်အနည်းငယ်ပိုဆိုးသည်။
G3 မှ 10j ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်အတွေ့အကြုံသည်ဘက်ထရီသာမက၊ G2 မှာ CloudyG3 1.3 ကို install လုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့် configuration ဟာတော်တော်ဆင်တူတယ်။ G3 တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်သည့် Processor မှလွဲ၍ ။
G3 အရွယ်အစားရှိသော G2 ဗားရှင်းကိုသူတို့ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒါဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ငါပြောတဲ့ g3 မရှိတဲ့အတွက်မင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါမှာ g3 ရှိတယ်၊ ငါ့ဝမ်းကွဲနဲ့ ဦး လေးက g2 ရှိတယ်။ g3 ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်ရှားပါးသည် (ကျွန်ုပ်သည် g2 ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်) သို့သော်ထိုဖန်သားပြင်ဖြင့်သင်နောက်ထပ်ဘာတွေတောင်းနိုင်မလဲ။ ထို့အပြင် g2 ကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အမြစ်တွယ်သည်။
ငါအသစ် update ကိုနှင့်အတူ G3 ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ သံသယဖြစ်၏
လူ့မျက်စိသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိမြင်နိုင်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းခြင်းမရှိသော pixel များ၊ အကယ်၍ ၎င်းတွင် 8 cores နှင့် 3gb RAM ရှိနိုင်သည်ဆိုပါက lg g2 သည်ယနေ့တွင်အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများ၏အမြင့်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းကွာခြားချက်။
Gameloft ၏ MMORPG Order & Chaos Online သည်အခမဲ့ဖြစ်လာသည်